Izindaba - Indaba yempumelelo yezithombe ezitshekile
Indaba eyimpumelelo yezithombe ze-oblique
Singakubona lokho ngoba i-RIY-DG4pros isebenzisa amalensi amade obude obugxilile, indlu engezansi kwemodeli ye-3d icace kakhulu ukuyibona. Ubuncane besikhawu sesikhathi sokuchayeka sekhamera singafinyelela ku-0.6s, ngakho-ke noma izinga lokugqagqana kwe-longitudinal likhushulwa laya ku-85%, akukho ukuvuza kwesithombe okwenzekayo.
Imigqa yaphansi yezakhiwo eziphakeme kakhulu icace kakhulu futhi iqondile ngokuyisisekelo, okuqinisekisa ukuthi singathola izinyathelo ezinembe kakhudlwana kumodeli kamuva.
Okudlule:Kuyini ukusebenza kahle kwe-DG4Pros? Ngiwamisa kanjani amapharamitha afanele?
Olandelayo:Ukuthi i-chromatic aberration kanye nokuhlanekezela kuyithinta kanjani i-ima